Yini izindawo zokukhokha intela? | Ezezimali Zomnotho
Uma kunesihloko esishisayo emphakathini, lokho akuyona enye ngaphandle kwezindawo zentela. Ikakhulu, ngokubuka kwe- intela okuyiyona ethinta kakhulu abakhokhi bentela. Ngoba ngaphezu kwakho konke isenzo esibonakalayo sobumbano futhi esinengxenye encane yomphakathi njengabaphikisi abaphambili balesi senzo njengokungajwayelekile okuncane. Ngoba ngakolunye uhlangothi, akumele sikhohlwe ukuthi ayikho indawo eyodwa yentela, kepha iningi kakhulu kunalokho okucatshangwa umbono womphakathi kazwelonke.
Ukuqonda le nkinga yentela eyinkimbinkimbi, akukho okungcono ukwedlula konke ukujula kwayo ukuthi ichaza ukuthini. Yebo, izindawo zokukhokha intela ngokuyisisekelo ziyisizwe noma indawo ebonakala ngokulinganiselwa kwayo noma ikakhulukazi eyayo intela ephansi. Futhi zisetshenziswa yingxenye yomphakathi efuna ukubona kwehliswa intela okufanele bayikhokhe ngokomthetho wamazwe abo. Kwanele ukukhumbula ukuthi ngokwezinhlangano ezahlukahlukene zomhlaba njengamanje kunezindawo ezingaba ngu-50 zentela ezisabalele umhlaba wonke, ngisho nasemazweni angalindelwe ngabafundi uqobo.
Enye yezincazelo zezindawo zokukhokha zentela ezingaqondakala kangcono ngabasebenzisi ukuthi ziyizindawo ezinemithetho yentela kepha ezixegayo kakhulu kumsebenzisi. ukukhokha intela kwangempela. Lapho kungabekwa khona njengendawo yokuhlala esemthethweni yabantu bemvelo noma bezomthetho. Ngenhloso eyodwa yokukhokha intela encane, ekugcineni lokho kumayelana nani. Lesi ngesinye sezizathu sokuthi kungani kuyisihloko esinempikiswano njengabanye abambalwa. Ngoba, ngaphezu kwalokho, imali eningi isengozini ezindaweni ezibizwa ngokuthi yizintela. Yisiphi isihloko okukhulunywa ngaso njengamanje. Ngaphandle kokunye ukucatshangelwa kwezomthetho ngisho nangombono wokuziphatha.
1 Izindawo zentela: ufunani?
2 Ziyini lezi zikhungo zentela?
3 Amapharadesi njengezindawo ezingaphandle
4 Zinikezani lezi zindawo?
5 Umehluko phakathi kwala mazwe
6 Kuthiwani ngezinkampani zaseSpain?
Izindawo zentela: ufunani?
Kunento eyodwa ecace bha ngaphakathi kwalezi zindawo ezikhethekile nokuthi okufunwa ngaphezu kwakho konke ukukhokha imali encane kunalokho okufanele ukwenze ukuhlela ngokusemthethweni ezweni lakini. Noma ngabe yini lena, ithinta wonke amazwe emhlabeni futhi ingathinta izakhamizi zaseSpain, zaseMelika, zaseJapan noma olunye ubuzwe. Kulesi simo esivamile, kunesici okufanele usicabangele kusukela manje kuqhubeke. Lokhu yilokhu kubhekisa ekujezisweni okungenziwa yile mikhuba engemihle esifiso sabo esikhulu sokugcina imali eningi kuma-akhawunti abo noma omndeni.
Ngakolunye uhlangothi, umthelela onawo kuwo ama-akhawunti ajwayelekile wezwe. Kufike ezingeni lokungakhuphuli izigidi nezigidi zama-euro minyaka yonke. Kuyiqiniso eliveziweyo, ngeshwa, minyaka yonke. Akumangalisi ukuthi kuliqiniso elingenakuphikwa elingabonakala usuku nosuku. Kulesi simo esikhathazayo esenziwa kuwo wonke amazwe omhlaba. Ngoba akusilo ubukhosi bezwe elilodwa, kepha kunalokho, ngokuphelele. Ukusuka kokunothe khulu ukuya kokuncani okuthuthukeko kiyo yoke i-geography yeentjhabatjhaba.
Ziyini lezi zikhungo zentela?
Ngalesi sikhathi kuza isihloko esilindelwe bonke abafundi futhi leso akusiso esinye ngaphandle kwamazwe noma izindawo ezikhona ezibhekwa njengendawo yokukhosela yentela. Yebo, njengoba beseshilo phambilini ukuthi bafinyelela isibalo sezindawo ezingama-50, kukhona okugqame kakhulu kunabanye nokuthi bangakumangaza ngendlela ekhethekile kusuka manje.
Ngoba empeleni, ekupheleni kuka-2017 ongqongqoshe bezomnotho nezezezimali be-European Union babeke uhlu olumnyama lwezindawo zokukhokha intela okuyi yakhiwe ngamazwe ayi-17, okukhona phakathi kwayo iPanama, iTunisia, iSouth Korea, i-United Arab Emirates noma iMongolia, phakathi kwezinye ezihambisana kakhulu. ISpain, kunalokho, inohlu lwayo, olunzima kakhulu lapho lufaka khona amanye amazwe. Ngokuqondile, uhlu lunamazwe angama-48 futhi namuhla ingxenye enhle yawo iyaqhubeka kulesi simo. Kunoma ikuphi, i-Andorra, iNetherlands Antilles, i-Aruba, iBahamas, iBarbados, i-United Arab Emirates, iJamaica, iMalta, iTrinidad neTobago, iPanama, iSan Marino neSingapore sebephumile.
Amapharadesi njengezindawo ezingaphandle
Kunoma ikuphi, isici esisodwa esidonsela ukunakekelwa okukhethekile ukuthi kubhekiswe kwezinye izindawo eziyinqaba ezibhekwa njengezindawo ezinkulu zentela okwamanje. Vele amagama abo asezindebeni zawo wonke umuntu futhi akunzima kakhulu ukwazi ukuthi yini IFiji, iSolomon Islands, iJersey noma i-Isle of Man ngamanye amapharadesi aqhamukayo ngaphakathi kwalolu hlu oluyinkimbinkimbi lwezindawo ezimiselwe ukweqa intela. Ngokuvamile ngenethiwekhi yezinkampani ezithile, kepha ezingasetshenziswa futhi ngabantu abanemali enkulu.
Ngakolunye uhlangothi, kulula kakhulu ukuthi wazi ukuthi ngokusho kombiko owenziwe yi-NGO Intermon Oxfam ukhombisa ukuthi imali edluliselwe kulezi zindawo ivukile eminyakeni edlule Ama-euro ayizigidigidi ezingama-24. Lesi sibalo esimangalisayo siqinisekisa ukuthi izindawo ezibizwa ngokuthi yizindawo zentela empeleni zihambisa cishe ingxenye yesithathu Yomkhiqizo Wasekhaya Womhlaba (GDP). Imali engeke isetshenziselwe ekugcineni ukwenza ucwaningo, izinsiza zomphakathi, ezempilo noma ezinye izindawo ezibaluleke kakhulu kubakhokhi bentela esifundeni ngasinye esithintekile yilesi sihlava sezimali.
Zinikezani lezi zindawo?
Akungabazeki ukuthi lawa masayithi anikeza isisombululo ezinkingeni zezimali zabantu abanamandla amakhulu okuthenga kuma-akhawunti abo. Akumangazi ukuthi leli isu elisetshenziswa ukuheha imali yabanamandla kakhulu kwezomnotho emhlabeni. Kulesi simo esivamile, izindawo zokuthelisa ngokungangabazeki zinikeza indlela ephephe kunazo zonke yabo amasu wokuhlela intela. Kwenziwe ngendlela efanele ngamasu abanye abeluleki bezezimali abangathembekile. Kuze kube seqophelweni lokuthi beluleke amaklayenti abo ukuthi aye kulezi zingxenye zomhlaba lapho umthwalo wentela uphansi kakhulu. Noma kunalokho kwanelisa ngokuphelele ukuvikela izintshisekelo zakho zezezimali.
Ngakolunye uhlangothi, ifomula ejwayelekile kakhulu yokusebenzisa leli qhinga yizinkampani ezibizwa nge-offshore. Futhi nokuthi bavumela izidingo ezisemthethweni ukuthi zenziwe emahoreni ambalwa kakhulu ukuze bathole ukwelashwa okungcono kwentela kusukela manje kuqhubeke. Futhi zisebenza noma yikuphi emhlabeni, kufaka phakathi iSpain. Kuningi, noma kunalokho ngokweqile, imali eya kulezi zingxenyekazi ngenhloso ye- ukhokhe imali encane kakhulu kuze kube manje. Ngalo mqondo, eminye imininingwane yabezindaba ikhomba enhlanhleni enkulu ekhethe leli su lokubalekela. Ngamagama afanele kakhulu asezindebeni zabo bonke abafundi.
Umehluko phakathi kwala mazwe
Kunoma ikuphi, akukho kungabaza ukuthi akuzona zonke izindawo zokukhokha intela ezifanayo. Akuncane kangako ngoba kunomehluko omkhulu phakathi kwabo. Kuze kube seqophelweni lokuthi bancintisana ukuheha ingxenye enhle yabakhulu imali evela emhlabeni wonke. Lapho ezinye izindawo ezikhethekile ngentela yebhizinisi zivelela ukubaluleka kwazo okukhethekile, njengeJersey, iPanama noma iLiberia. Ngenkathi kwenzeka okuphambene nalokho, kukhona abanye abahlinzeka ngamamodeli abizwa ngokuthi ahlanganisiwe futhi umthombo wabo oyinhloko wokubhekisela kuyisiqhingi esifana neCayman. Yize kunjalo uhlu lungaba lude kakhulu futhi lube nesithukuthezi ngabafundi ngenxa yobude balo.
Futhi izindawo zokubhanga azikhohlakali, njengakwezinye izimo ezithile zaseLuxembourg noma eSwitzerland, ezihloselwe izinhlobo ezahlukene zamabhizinisi noma amaqembu abantu. Noma ngabe ivela ezindaweni ezingaphakathi kwe-European Union, yize kusolwa abezenhlalo abahlukahlukene. Ngakolunye uhlangothi, lokho banecala lokuziphatha, yize ingxenye enhle yokusebenza kwayo nokuthengiselana kusemthethweni kusukela ekuqaleni. Kulokho okube ngenye yezimpikiswano ezinkulu eminyakeni yamuva. Ngikweleta idumela elibi iziphephelo zentela ezinalo njengamanje.
Kuthiwani ngezinkampani zaseSpain?
Ekugcineni, enye yezinto ezithakazelisa kakhulu abakhokhi bentela baseSpain ngumphumela enawo ezinkampanini ezibalwe ezimakethe zezimali. Yebo, ngalo mqondo, nangokwe-Observatory of Corporate Responsibility, ama-86% ezinkampani ezingama-35 ezinkulu zaseSpain, ezibalwe enkombeni kazwelonke ekhethiwe, i- Ibex 35, banezinhlobo ezithile zezinkampani ezingaphansi kwezindawo zokukhokha intela. Okuthile abakwenzayo kusuka kumasu abo ebhizinisi futhi lelo iqiniso elitholakala kubo bonke abakhokhi bentela, yize benqatshwa ngabaningi babo. Kunoma ikuphi, izindawo zokukhokha intela zingenye yezihloko ezishisayo ezindebeni zomphakathi omningi. Ngale kolunye uchungechunge lokucatshangelwa kwezenhlalo.
Indlela ephelele ye-athikili: Ezezimali Zomnotho » Ipolitiki yezomnotho » Ayini amathente?